Iyini iphupho lefoni ephukile futhi entsha, iselula noma i-disk? Kungani ngidinga ukukhuluma efonini?
Namuhla siseduze kakhulu kuzo zonke izinhlobo zamagajethi, eklanyelwe ukwenza lula impilo yethu futhi sikwenze kube lula kakhulu. Ingxenye ebalulekile yokuphila kwendoda yanamuhla ibe yocingo, ngoba nsuku zonke sithatha inqwaba yamakholi, bhala imilayezo. Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi idivayisi ingaphupha kithi ephusheni. Kungani uphupha ifoni ephukile nesipho esisha, ngitshele izincwadi zokuphupha.
Kungani ifoni ephukile nephutha entsha iphupha?
Uma uphupha ifoni ephukile, ephukile, ungathathi lesi sibonakaliso njengento engalungile, ayikhombisi izinkinga. Umhumushi wephupho uthi isakhiwo esinjalo sephupho sisho nje ukwesaba kwakho kokulahlekelwa ngumuntu noma into ethile. Lo mzwa ukwenza ube yingozi kakhulu, ubuthakathaka futhi awuwenzi lutho oluhle. Ngakho-ke, uma wesaba ukulahlekelwa, yenza konke ukuyivimbela.
Kodwa uma ifoni ephathekayo entsha iphupha, uzoba nolwazi lokubona kanye nokuxhumeka okuthembisayo. Kungaba njengomngane omkhulu, nothando lweqiniso.
Uma ubona ifoni yakudala, i-disk ekhaya ephusheni, kusho ukuthi ebuhlotsheni obusondelene kakhulu futhi ngisho nesikhathi esidala. Nakuba lokhu akubi, kodwa ngezinye izikhathi udinga ukuba nesibindi.
Kungani uphupha ngocingo osibona ngaphandle? Kuvela ukuthi lokhu kuyisignali ukuthi othile uzama ukuphula amapulani akho, ukuze aphume ithrekhi efanele. Ngakho-ke, kufanelekile ukwesaba abantu abafisa ukungahambi kahle futhi ungaphambuki emigomweni ehlosiwe.
Kuyini umsindo ozwakalayo?
Uma unephupho efonini, kuyisibonakaliso sokuthi unabantu abanobukhwele abakuzungezile. Nakuba bengenayo ingozi ethile, kodwa kungcono ukubhekisisa futhi uhlale kude nalokhu.
Kusho ukuthini ukukhuluma ephusheni efonini, thola lapha .
Uma ukhuluma efonini ngephupho futhi awuzwa ngokucacile kusuka kubhalisile, lokhu kuyisibonakaliso sokuthi awunaki izihlobo zakho nabangani bakho, uzinike isikhathi esincane kubo. Nakuba unezinkinga zakho ezanele, zama ukuthola isikhathi sokubamba iqhaza empilweni yabantu abasondelene nawe.
Kungani ucingo luthinta efonini yakho ephathekayo? Kuyinto ephathekayo yezindaba ezinhle futhi ezijabulisayo. Kodwa uma ungaphenduli, kusho ukuthi uma uvuka, uvala amehlo akho ezinkingeni nasezinkingeni, uzama ukuzenza sengathi azikho. Isikhundla esinjalo akuyona inketho, ngoba izinkinga ngokwazo azikwazi ukunyamalala, kungakhathaliseki ukuthi usuka kanjani kubo. Ungesabi izithiyo, uzobhekana nakho konke uma unesibindi!
Uma ephusheni unesimo esifanele sokuthukuthela nomzwelo, u-hang up, izingxabano nezinkinga zenzeka kuwe nomndeni wakho empilweni yangempela. Kodwa ungakhathazeki okuningi, vele ubekezelele abathandekayo bakho futhi ungavumeli imizwelo.
Ake siphuphe amaphupho. Yini ihhashi iphupha ngayo?
Yini indoda noma umfana wangaphambili ophuphayo?
Kungani uphupha ngomfana othanda ngempela?
Ama-eggplant epanini lokuthosa
I-Sexy Lion iHososcope
Ukuqedwa kwezinwele - ubuchwepheshe obusha kakhulu bokubala nokubala
Owesifazane uzwa kanjani?
Izinhlobonhlobo zokuzivocavoca zokuthuthukiswa kwamakhono amakhono emoto
Indlela yokuqeda imizwelo emibi: intukuthelo, intukuthelo, umhawu
Ukudla komama ohlengikazi: ukugwema i-colic yamathumbu emntwaneni
I-Horoscope ye-Lion-Woman ka-2016 - uthando nangonyaka wokuzalwa
Unyaka Omusha Omusha 2017: Siyakuhalalisela ngabangane ezithombeni, amavesi kanye nama-sms. Ukuhlwanyela okumnandi nokuncoma okufishane ngeNyaka Omusha Omusha
Ukulungiswa kwengqondo kwengane esikoleni
Isibonelo sokugqoka izinja ngezandla zabo
Ukuphindiselela komuntu owayengumfana: iseluleko